XOG XASAASI: Odayaal iyo ganacsato ku jufo ah Madaxweyne Farmaajo oo lagu xiray Gedo (Ogow Ujeedka) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Odayaal iyo ganacsato ku jufo ah Madaxweyne Farmaajo oo lagu...
XOG XASAASI: Odayaal iyo ganacsato ku jufo ah Madaxweyne Farmaajo oo lagu xiray Gedo (Ogow Ujeedka)
Gedo (Halqaran.com) – Odayaal ku heyb ah Madaxweynaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay lagu xiray Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay ganacsato kale oo iyaguna la sheegay in ay ku heyb yihiin Madaxweyne Farmaajo.
Tani ayaa waxaa la sheegay inay jawaab u tahay xariga Magaalada Muqdisho loogu gaystay Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan), oo tan iyo 31-kii bishii August ku xiran Magaalada Muqdisho.
Inkastoo Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wasiirka Amniga Jubbaland ay isu beel yihiin ayaa hadana xubnaha lagu xir xiray Degmada Beled Xaawo waxaa loo beegsaday jufo hoosaad.
Saraakiil ay jilib wadaag yihiin Wasiir Janan ayaa dhabarka ka riixaya tallaabada lagu beegsanayo xubnaha ay jufo hoosaadka yihiin Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ugu dambeyn, maamulka Jubbaland ayaa horey ugu goodiyay in jawaab adag ka bixin doonaan xariga gardarada ah bay yiraahdeen ee loo gaystay Wasiir Janan.
ku heyb ah
lagu xiray Baladxaawo